UpSnap: Moobil la Qiimeyn Karo, Maxali ah, iyo Xayeysiin Juquraafi Ahaaneed | Martech Zone
UpSnap: Mobil la Qiimeyn karo, Maxali ah, iyo Xayeysiis Juquraafi ahaan Beegsan
Monday, August 3, 2015 Isniin, Oktoobar 12, 2015 Douglas Karr
UpSnap waxay bixisaa shabakad xayaysiis moobil ah oo bixisa in kabadan hal bilyan oo muuqaal bishii. Iyo iskaashiga ay la leeyihiin qaar ka mid ah bogagga ugu waawayn, waxay awoodaan inay ku soo bandhigaan xayeysiis shabakadaha saddexaad oo ah qiime ka badan bilyan 100 bilyan. UpSnap waxay awood kuu siineysaa inaad beegsato macaamiisha ku dhow meheraddaada. Mar alla markii ololahaagu si toos ah u socdo, UpSnap wuxuu u soo bandhigi doonaa xayeysiiskaaga moobiilka macaamiisha meel shan mayl u jirta Bartilmaameedsigu wuxuu ku fidayaa dibedda iyadoo lagu saleynayo helitaanka taraafikada iyo raadiyaha aad rabto.
UpSnap wuxuu bixiyaa wax kasta oo ka imanaya naqshadeynta xayeysiinta illaa warbixinta:
Saxiix ka dib, ka soo wac Khabiirka 'UpSnap Mobile Expert' si aad u dhammaystirto faahfaahinta ololahaaga moobiilka.
UpSnap ayaa nashqadeyn doonta oo calaamadeyn doonta bogga soo degitaanka iyo xayeysiiska xayeysiiska ganacsigaaga. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad dib u eegto oo aad oggolaato farshaxanka.
Xayaysiiskaaga waxaa lagu soo bandhigi doonaa illaa 20,000 jeer bishii boqolaal ka mid ah goobaha ugu sarreeya iyo barnaamijyada kaliya $ 100 / mo.
Bilow inaad hesho wicitaanada, booqashooyinka dukaanka iyo waxyaabo kale. Waxaa intaa dheer, waxaad dib u eegi kartaa waxqabadka ololahaaga bil kasta Analytics warbixinta.
UpSnap waxay bixisaa xayeysiis firfircoon oo ku saleysan goobta, daabacaha, dalabka mobilada, iyo astaanta macaamiisha.
SNAPalytics waxay bixisaa xog weyn Analytics xitaa xayeysiiyaasha ugu yar. Fahmaan habdhaqanka isticmaaleyaasha oo ku lug yeelo cabirka ololaha waqtiga-dhabta ah si aad ula beegsato macaamiisha barta markay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan.
Tags: bartilmaameed juqraafiyeedxayeysiinta deegaankaxayeysiinta ku saleysan goobtanetwork ad mobilexayeysiiska juqraafi mobilexayeysiiska maxaliga ahbeegsiga mobiladakacsan
Sida Loo Abuuro Kalandarka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada
Sidee Jawaab La'aan Bulsheed u Dhaawaceysaa Ganacsigaaga
Oktoobar 11, 2016 at 12:19 PM
Shirkadeena waxay maalgashi ku sameysaa xirmo tijaabo ah oo leh Upsnap. Lacag iyo waqti lumis dhammaystiran. Jawaab celin ma leh, hogaamin la'aan, warbixino majiraan.
Ha lumin waqtigaaga.